Complications of Childhood Obesity - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကလေးဆို ဗိုက်ပူပါးဖောင်း ဝကစ်ကစ်လေးတွေဟာ အင်မတန်မှ ချစ်စရာပါ။
ဆွဲညှစ်ချင်စရာ၊ အာဘွားပေးချင်စရာ၊ ပါးဆွဲလိမ်ချင်စရာလေးတွေ ရယ်ပေါ့….
သို့ပေမယ့် သူ့အသက်အရွယ်နဲ့သူ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက်ပိုနေပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ရေရှည်မှာ ကလေးအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသနာတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကြပ်အပါအဝင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြသနာများ
အရွယ်မတိုင်မီ အပျိုဖော် လူပျိုဖော်စောဝင်ခြင်း
ပိုထွား၊အားပိုကြီးသဖြင့် အခြားကလေးများအပေါ် အနိုင်ယူဗိုလ်ကျခြင်းများ
ရွယ်တူကလေးများထက် အရွယ်ပိုထွားနေတာကြောင့် အခြားကလေးများနဲ့ တန်းတူပေါင်းသင်းဖို့ခက်ခဲပြီး အထီးကျန်ခြင်း
အဝလွန်တဲ့ကလေးတွေဟာ အဝလွန်ခြင်းပြသနာမှ ရုန်းထွက်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ပြီး အရွယ်ရောက် အသက်ကြီးတဲ့အထိ ဆက်လက် အဝလွန်နိုင်ချေများတာကြောင့်…. အဝလွန်ခြင်းရဲ့ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြသနာတွေကို ကြီးတဲ့အထိ ဆက်လက်ခံစားရနိုင်ချေများပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖေဖေမေမေတို့အနေနဲ့ မိမိကလေး အဝလွန်နေပြီလားဆန်းစစ်ပါ။ အဝလွန်နေပြီဆိုတာနဲ့ အဝလွန်ခြင်းကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားပါ။လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ
ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး စနစ်တကျ ကုသမှုခံယူသင့်ကြောင်း အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။